KUTHENI UMTSHATO UNZIMA? NANTSI INDLELA YOKUHAMBA KUMAXESHA ANZIMA - UBOMI BOMTSHATO
Eyona Ubomi Bomtshato Ezona ndawo zinzima zomtshato (kwaye ungazoyisa njani)
Ezona ndawo zinzima zomtshato (kwaye ungazoyisa njani)
Umtshato awuyonto ukuba ayisiyiyo i-adventure. Nantsi indlela yokuhamba amaxesha anzima. ITowaistudio / iShutterstock Ukuhlaziywa ngoJulayi 23, 2020
Amava amnandi ebomini ahlala ebonakala ngathi anengxaki ethile. Sonke siyazi ukuba umtshato unzima. Kukho into engenakuphikiswa enzulu malunga nabantu ababini abazibophelela kwenye, akunjalo? Kwaye kwangaxeshanye, kukho ubungqina obungapheliyo obuvela kubantu abatshatileyo malunga nobunzima bokuzinikela. Yintoni kanye kanye ngomtshato eyenza ukuba kube nzima kangaka? Zeziphi ezona ndawo zinzima zomtshato?
Ngokuqinisekileyo akukho mpendulo-nye-ilapha apha; endaweni yokuzama ukubonelela oko, nazi iindawo ezintathu ezinzima zomtshato. Kukwakho nezinye iingcebiso zendlela yokoyisa.
Umtshato Ubonisa Imida Yakho
Ngaba uyazi ukuba unemiqathango kwaye kukho indawo yokumisa kuzo zonke izinto onokuzifeza kwaye uzenze? Uninzi lwabantu, loo ndawo yokumisa iza ngokukhawuleza kunokuba bekrokrela. Yikholwe okanye ungakholelwa, baninzi abantu abathi, ngokwenza, bangazi ukuba basikelwe umda; ukuba zikho izinto abangenako ukuzenza.
Akukho mntu, ewe, uya kuze ayamkele le nto. Ukuba unikwe uvavanyo ngombuzo omnye ofundwayo, 'ngaba unemiqathango?', Abantu abangama-99% bangaphendula 'ewe.' Ke, kukho into exakayo eyenzekayo apha: abantu bavuma ngokwazi ukuba banemiqobo, kodwa xa bejongane ubuso ngobuso nomnye umda wabo, bayawa. Okanye, okubi, ziyaqhuma.
Isinxibo sepant yomtshato
Emtshatweni, wena neqabane lakho nisebenza kunye zisa iinjongo zakho, amaphupha akho kunye nethemba lakho . Kuyo nayiphi na inkqubo yokusebenzisana, uya kujongana nokusikelwa umda-ayinakuphepheka. Kwaye oku kuqala ukukhanyisa ukuba kutheni ukuboniswa komda wakho yenye yezona ndawo zinzima emtshatweni. Yinto enye ukujongana nokusikelwa umda kwakho wedwa, yenye yokwenza phambi kobuso bomnye umntu yonke imihla.
Ukwazi nokwamkela ukusikelwa umda kwakho luphawu lokwenene lokuthobeka. Ukuthobeka kuyafuneka; kuthatha okuninzi. Kungenxa yoko le nto ukuboniswa kwemida yakho kunzima.
Umtshato Uyakukhumbuza ukuba awusoloko ulawula
Ngokunxulumene nobunzima malunga nokusikelwa umda kukufumanisa emtshatweni abangahlali belawula. Inxalenye yesizathu sokuba abantu bonwabele ubomi obungatshatanga kakhulu kungenxa yokuba imvo yabo yokuba nolawulo olupheleleyo ihlala ihleli. Emtshatweni, oku kuhanahanisa kolawulo kuyeyona nto iphambili.
I-Singledom, kwelinye icala, kuthetha ukuba ulawula ubukumkani bakho; unegama elipheleleyo malunga nento oyenzayo, uyenza nini, kwaye uzakuchitha malini kwinkqubo. Akunjalo emtshatweni. Umtshato mhlawumbi uchazwa ngcono njengezikumkani ezibini ezidibanayo (okanye ukungqubana — yeyiphi efanelekileyo kuwe). Yinto eyenzekayo xa abantu ababini bethetha ngokugqibeleleyo ngobomi babo bengena 'kubambiswano lokuba bathi,' ukutsho. Isiphumo? Ukukhululwa kolawulo olupheleleyo.
imibala yepeyinti yethoni yomhlaba
Ukucaca, ayisiyiyo into yokuba emtshatweni usuka ekubeni nolawulo uye ekulawuleni. Yinto yokuba usuka kulawulo uye ekubeni nolawulo oluncinci. Unolawulo oluncinci kuba ngoku izigqibo zakho zinokuchaphazela enye kwaye kufanelekile ukuba kungeniswe enye.
Kodwa kutheni oku kuthetha ukuba umtshato unzima? Kungenxa yokuba akukho nto yoyikisayo ebomini njengokuziva ungaphandle kolawulo. Ukuphulukana nolawulo, nokuba kungakanani na, kuthanda ukuvelisa i-vertigo ethile. Abanye, eli dini lolawulo banokuziva bebiza kakhulu kangangokuba ishishini lomtshato liyakuthintelwa, liphume emva kokungena, okanye likhuphe bonke ubuhle balo ngenxa yemfuno yomntu omnye onolawulo.
Umtshato ubangela amanxeba akho anzulu
Phantse rhoqo ezantsi kwebali lomsindo wakho, usizi okanye uloyiko linxeba elidlulileyo. Kwimeko enkulu yamatyala, inxeba lityala amava obuntwana. Kulula ukuphosa ukuba oku kuyenzeka, nangona kunjalo, ngenxa yomahluko phakathi kweemvakalelo zokuqala nezesekondari.
Omnye umzekelo weemvakalelo zesibini ngumsindo. Umsindo uhlala ukhawuleza kangangokuba iimvakalelo eziphambili ziyaphoswa.
Eminye imizekelo yeemvakalelo eziphambili, ngakumbi ezinxulumene nomsindo, lusizi, iintloni kunye nokuziva ubuhlungu. Uyasibona isizathu sokuba umsindo uvele ngokukhawuleza emva kwezi mvakalelo, akunjalo? Ngubani othanda ukuba lusizi, ukuziva uneentloni, okanye ukwenzakala? Akukho namnye. Ngokubanzi, umsindo sisalathiso sokuba kuye kwafunyanwa isiva sangaphambili, ukuba elinye lamanxeba akho anzulu liye labangelwa. Ukuba utshatile okanye ubukhe wanobudlelwane obusondeleleneyo ngaphambili, ke uyazi ukuba oku akunakuphepheka- ekugqibeleni, umntu uza kufumana elinye lamanxeba okuqala akhuhlwe kuwo. Ayisiyonto imnandi, ngamanye amaxesha isenzeka ngengozi, ngamanye amaxesha ayenzeki.
Ayichanekanga ngqo, nangona kunjalo, ukuba umtshato ubangela ezona nzondo zakho zinzulu. Yiloo nto umtshato ubangela ukuba ubangele amanxeba akho anzulu: ubudlelwane obusondeleyo kunye nomnye umntu.
imigca edumileyo evela kumakoti oyinkosazana
Umtshato unokuba lolona lwalamano lusondeleyo, lusengozini, kunye nolona lwalamano lunzulu oya kuze ulonwabele. Kwinkqubo, amanxeba akho anzulu, amanxeba, kunye ne traumas zihlala zihambela phezulu, zibekwe ngokugqibeleleyo ukuze zibangele. Yinto eyenzekayo xa wabelana ngobomi nomntu.
Ukusondela kufutshane nomnye kukuvula ukuba uchukunyiswe, kodwa esi ayisosizathu sokuphepha umtshato (okanye ubuhlobo obunzulu). Ukuphepha sisilingo, hayi isisombululo.
Le yenye indlela yokuthetha, phuhlisa ukuzazi kwakho. Isiseko kuwo wonke umtshato ophumelelayo kukuzibophelela ekusebenzeni nzima kokwazi ukuba ungubani-ukufunda okubangela, ukuqonda amanxeba akho, kunye nokufumanisa ukuba la mava enza njani ukuba ungubani. Ubudlelwane apho le projekthi yolwazi lokuzimela ilahlekile, kwelinye icala, ayithandi ukuhamba kakuhle.
Ungaqala njani iprojekthi yokwazi ngokwakho? Kukho izinto ezahlukeneyo onokuzenza. Unyango yindawo entle onokuqala kuyo. Inkqubo yeveki yokuntywila kwisayikholojhe kunye neemvakalelo zakho kunye nengcali eqeqeshiweyo inesibonelelo sokukunceda uhambe ngokukhuselekileyo kwezona ndawo zibuthathaka kuwe. Iphepha elichazayo ukuba awunanto: ayisiyonto ilula leyo, kodwa kufanelekile.
izipho zangoku zeminyaka ngeminyaka
Ngenye indlela, ungaqala ngokumema iqabane lakho kunye nabahlobo abasondeleyo kwiingxoxo ezizizo malunga nendlela oqhuba ngayo. Oku kunokuvakala kulula kakhulu, kodwa kukwazisa ukuba kunjani, ukunyaniseka ngobomi bakho bangaphakathi. Ukuba ungathanda ukoyisa ezona ndawo zinzima zomtshato (okanye ubalungiselele kwangaphambili), ukuqala komsebenzi wokumba umhlaba wakho wangaphakathi kufanele ube phezulu kuluhlu lwakho oluphambili.
Ukukhangela iingcebiso ekwakheni umtshato ophumelelayo kunye nezixhobo zokwenza ukuba usebenze? Isixhobo esitsha esisandula ukutshata Ngaba ivenkile yokumisa izibini ezakha ubomi bazo kunye.
ungayifumana njani prenup
Ndiza kuba khona ukucaphula kuwe
izacholo zomtshato ezinxibe iimpahla ezingenamtya
Iikhabhathi ezimhlophe zekhitshi